Maalinta: Oktoobar 20, 2017
Kaarka Daarista Xarunta 5 ee Ardayda ka timaadda Gaadiidka Kayseri
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kayseri Inc. Waxay ku shaqeysaa lix qodob oo kaladuwan si ardayda si fudud ay u helaan kaararka dhimiskooda ayna u helaan fiisooyin kaararka jira. Xawaaladaha kaararka laba qol oo kala duwan oo ku yaal Jaamacadda Erciyes [More ...]
Xarunta Cilmi-baarista Xarunta Kahramanmaraş
Furitaanka Xarunta Saadka ee Kahramanmaraş waxaa fulin doona Wasiirka Gadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan Kahraman Kahramanmaraş (Türkoğlu) Xarunta Saadka; 22 by Ahmet ARSLAN, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Hotelka Baqdaad Waxaa isticmaala TCDD maaddaama marti loo yahay in la keeno Konya
Hoteelka taariikhiga ah ee Baqdaad, oo ah dhismaha ugu kala duwan ee Konya marka la eego xagga dhismaha, waxaa loo isticmaalaa sidii hoyga martida ee tareenka gobolka. Furitaanka xarunta cusub, dhismahan taariikhiga ah waa in hadda la keenaa Konya. Konya ugu horreeyay [More ...]
30 in la qabto bisha Oktoobar iyada oo ka qaybqaadashada hoggaamiyayaasha hoggaamiyeyaasha markii ugu horeysay ee tareenka BTK
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in safarka ugu horeeya ee rasmiga ah ee khadka tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars (BTK) uu dhici doono bisha Oktoobar. Laga bilaabo Edirne ilaa tareenka xawaaraha sare ku socda [More ...]
17 Oktoobar 2017, oo ah kii saddexaad ee Aqoon-isweydaarsiga Kooxaha UTİKAD, Ururka Soo-saareyaasha Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah, ayaa la qabtay Talaadadii. Hawlaha Kooxda UTNAD ee 2017 waxaa lala wadaagaa xubnaha iyo [More ...]
Baska 10 ee loo qoondeeyay degmada 10 ee degmada Şanlıurfa ee Magaalo Xeebeedka waxaa la siiyay Mayors xaflad. Duqa Magaalada Nihat Çiftçi ayaa yidhi, “Inta aan u adeegno degamadeena, [More ...]
Cimilada reer Adana waa xaflad
Dowladda Hoose ee Magaalada Adana, oo taageerta ururrada isboortiga ee heer qaran iyo kuwa caalami ah oo gacan ka geysta dhiirrigelinta Adana, ayaa loo yaqaan '8' oo lagu abaabulay xusuusta duuliyaha dambe ee Sabri Kavuncu. Caannimada Caalamiga ah ee Adana Duulista iyo [More ...]
Agaasinka Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara ee “EGO” ayaa sii wadaya bixinta tababbarka xirfadaha shaqo ee si joogto ah loo bixiyo sannad kasta si loo ilaaliyo kartida xirfadeed ee darawallada heerka ugu sarreeya. Tababarada la siiyay darawalada EGO; aasaas [More ...]
Xarumaha Goobta Baspinar Goobaha Baabuurka waxaa la dhisi doonaa Adeegga Mashruuca Mashruuca Survey ayaa la qaadi doonaa
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay sii wadaysaa hirgalinta mashaariicda iyada oo wali sii wadaysa yareynta dhibaatada taraafikada isla markaana ay ku fidayo gaadiidka dadweynaha. Nidaamka tareenka, oo lagu rakibay baabuurta dadweynaha ee leh badda iyo giraangiraha caagga ah [More ...]
In kasta oo sahanka la qorsheynayey in lagu furo Waddada Istaanbuul si ay taraafikada u galaan, ayaa waxaa la dhammeystirey taraamkii nostalgic ee ay sameysay shirkad ku taal Denizli. taraamka hore loogu talagalay by technology qasayso la muraaqooda tamar yaraan soo saaray Turkey Duzce [More ...]
Nidaamka Tareenku wuxuu ka dhigayaa OMÜ xitaa ka sii fiican
Jaamacadda Samsun Ondokuz Mayis (OMU) Kuliyadda Dhaqaalaha iyo Sayniska Maamulka 2017-2018 kulan sanad dugsiyeedka, Rector Prof. Dr. "Nidaamka tareenka ee Sait Bilgiç wuxuu ka dhigayaa kambuyuutarradeenna kuwo aad u qurux badan" [More ...]